5ta Faa'iido ee ugu Fiican Qaadashada Phosphatidylserine (PS) -Qeebinta
Bogga ugu weyn > Phosphatidylserine (PS)
5-ta Faa'iidadood ee Qaadashada Phosphatidylserine (PS)
Aragtidayada, ayaa ah Phosphatidylserine waa kaabista ugu fiican ee hadda laga heli karo suuqa Cofttek. Waxaan ku soo bandhigeynaa sababaha aan ku taageerayno doorashadan. Marka hore, kaabidani waxay bixisaa qiimaha ugu fiican ee lacagta - badweynta badeecooyinka qaaliga ah, kaabiskan Phosphatidylserine wuxuu ku dhacayaa dhinaca la awoodi karo. Marka labaad, kaabiskan ay sameysay shirkadda Cofttek waxaa lagu sameeyay xarun la kormeeray oo sidaas darteed, tayadeeda waa la tijaabin karaa. Shayga sidoo kale waxaa lagu tijaabiyay daahirnimo iyo waliba awood. Marka, haddii aad raadineyso inaad iibsato mid dheeri ah oo loo yaqaan 'Phosphatidylserine supplement', fadlan nagala soo xiriir cofttek.com.
Phosphatidylserine (PS) Su'aalaha badanaa la isweydiiyo
Waa maxay Phosphatidylserine (PS)?
Fosfatidylserine (PS) waa fosfooliid iyo iskudhis aad ugu dhow fiber-ka cuntada ee badanaa laga helo unugyada neerfaha ee aadanaha. Phosphatidylserine wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa xinjirowga shaqada wuxuuna muhiim u yahay shaqada garashada maadaama Phosphatidylserine uu fududeeyo gudbinta farriimaha u dhexeeya unugyada neerfaha.
Celcelis ahaan, cunno reer galbeedka ah ayaa siisa ku dhawaad ​​130 mg oo ah Phosphatidylserine maalin kasta. Kalluunka iyo hilibka ayaa ah ilo wanaagsan oo laga helo Phosphatidylserine, oo sidoo kale laga helo xaddiyo kala duwan oo laga helo waxyaabaha caanaha laga helo iyo khudradda. Soy lecithin waa isha kale ee wanaagsan ee Phosphatidylserine. Si kastaba ha noqotee, inkasta oo Phosphatidylserine uu isku dufan karo jirka sidoo kalena loo cuni karo cuntada iyadoo loo eegayo ilaha dabiiciga ah, baaritaanka horudhaca ahi wuxuu muujinayaa in heerarkiisu hoos u dhacaan da'da. Sidaa darteed, maalmahan, kordhinta Phosphatidylserine waa la dallacsiinayaa, gaar ahaan shakhsiyaadka waayeelka ah ee iska diiwaangelinaya hoos u dhac kasta ee xusuusta iyo shaqada garashada.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, baahida loo qabo kaabisyada loo yaqaan 'Phosphatidylserine supplements' ayaa si aad ah u kordhay tan iyo markii daawooyinka loo yaqaan 'Phosphatidylserine supplements' loo tixgeliyo inay tahay daawo dabiici ah oo loogu talagalay xaalado kala duwan, sida walaaca, Alzheimers, feejignaan la'aanta feejignaanta, isku buuqsanaanta, culeyska maskaxda iyo cillad maskaxeed oo badan. Taas marka laga reebo, kaabisyada loo yaqaan 'Phosphatidylserine supplements' ayaa sidoo kale loo yaqaanaa inay xoojiso wax soo saarka jirka, waxqabadka jimicsiga, niyadda iyo hurdada.
Maqaalka, oo ay weheliso ka wada hadalka dhowr howlood oo muhiim ah iyo faa'iidooyinka Phosphatidylserine, waxaan sidoo kale u qodi doonnaa si qoto dheer si aan u soo bandhigno waxtarka Phosphatidylserine ee ugu fiican ee haatan laga heli karo suuqa
Maxay u fiican tahay fosfatidylserine?
Phosphatidylserine waa shey dufanka badan oo loo yaqaan fosfooldid. Waxay daboolaysaa oo ilaalisaa unugyada maskaxdaada waxayna kudhaxdaa farriin dhexdooda ah. Phosphatidylserine waxay door muhiim ah ka ciyaaraysaa ilaalinta maskaxdaada iyo xusuustaada. Daraasadaha xayawaanku waxay muujinayaan in heerka walaxda ku jirta maskaxda ay hoos ugu dhacday da'da.
Fosfatidylserine miyuu shaqeeyaa runtii?
Qaadashada fosfatidylserine waxay hagaajin kartaa qaar ka mid ah calaamadaha cudurka Alzheimers ka dib 6-12 toddobaad oo daaweyn ah. Waxay u muuqataa inay ugu waxtar badan tahay dadka leh astaamo daran. Si kastaba ha noqotee, fosfatidylserine wuxuu lumin karaa waxtarkiisa isticmaalka dheeraadka ah
Fosfatidylserine miyuu kaa dhigayaa mid hurdo badan?
Phosphatidylserine waa kaabis fosfooliid ah oo nafaqeeya oo joojiya soosaarka kacsan ee cortisol ee jirka, taasoo u oggolaaneysa caafimaad darro, heerarka cortisol ee sarreeya inay hoos u dhacdo, sidaas darteedna, hurdo nasasho badan ay dhacdo.
Waa maxay faa'iidooyinka fosfatidylserine?
Aynu eegno qaar ka mid ah faa'iidooyinka muhiimka ah ee Phosphatidylserine (PS):
Is Waa ikhtiyaar daaweyn wax ku ool ah oo ka dhan ah hoos u dhaca garashada iyo waallida
Cilmi-baaristii ugu horreysay ee lagu sameeyay xayawaanka ayaa muujisay in dheellitirka dheeriga ah ee Phosphatidylserine uu yareeyo xaddiga garashada garashada ama uu gabi ahaanba u rogo jiirka. Ka dib gabagabadyadan wanaagsan, daraasado ayaa loo sameeyay si loo falanqeeyo saameynta qaadashada Phosphatidylserine ee bini-aadamka iyo daraasado dhowr ah ayaa cadeeyay xaqiiqda ah in 200 mg kaabista xididka ee Phosphatidylserine ee bukaanka Alzheimers ay kordhiso heerka dopamine iyo serotonin, labada hoormoon ee diiwaangeliya hoos u dhac weyn haddii kale xaalada awgeed. Muhiimad ahaan, Phosphatidylserine sidoo kale waxay qabataa shaqada muhiimka ah ee ilaalinta dheef-shiid kiimikaadka, kaas oo sidoo kale bixiya gargaarka cudurka. (2) La daabacay: Phosphatidylserine iyo maskaxda aadanaha
② Waxaa Loo Isticmaalaa Caadi ahaan Saamaynta Nootropic
Dheefta Phosphatidylserine waxaa badanaa loo qoraa dadka waayeelka ah si kor loogu qaado feejignaantooda sidoo kale hoos loogu dhigo xirfadaha fikirka. Baadhitaankii ugu horreeyay ee daraasad ku sameeyay saamaynta Phosphatidylserine ee shaqada xusuusta ee ku jirta bani’aadamka waayeelka ah ee leh naafonimo xagga dhimirka ah waxay ku xiran tahay qaadashada 300mg soy ee ku saleysan Phosphatidylserine muddo seddex bilood ah iyadoo la hagaajiyay xusuusta. Sidoo kale daraasad kale ayaa qiimeysay saameynta saliida kalluunka Phosphatidylserine ee xusuusta waxayna shaaca ka qaaday in kaabista Phosphatidylserine ay kor u qaadday waxqabadka ereyga isla markaaba dadka da'da ah ilaa 42%. Sidaas awgeed, Phosphatidylserine dhab ahaantii waxay ku leedahay saameyn nootropic jirka. Si kastaba ha noqotee, cilmi baarista ku saabsan waxtarka firfircoon ee dhirta ka soo baxday Phosphatidylserine ee ka hortagga da’da xusuusta la xiriirta da'da waa mid xaddidan shaqooyin badan ayaa looga baahan yahay aaggan
Int Qaadashada Phosphatidylserine waxay sidoo kale kuxirantahay waxqabadka jimicsiga la xoojiyay
Warbixin lagu daabacay Isboortiga Isboortiga ayaa shaaca ka qaaday inay jirto caddeyn ku filan oo lagu caddeyn karo in kaabista Phosphatidylserine ay la xiriirto waxqabadka cayaaraha iyo kartida jimicsiga. Daraasadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in kaabista joogtada ah ee loo yaqaan 'Phosphatidylserine' ay yareyneyso xanuunka muruqyada iyo sidoo kale halista qofka inuu u yeesho dhaawacyo. Sidoo kale, daraasad kale ayaa shaaca ka qaaday in kaabista Phosphatidylserine muddo lix toddobaad ah ay wanaajisay sida dadka golf-ka u ciyaaraan ay iskaga daraan oo ay isugu daraan Phosphatidylserine iyo kafeyn iyo fiitamiinku waxay yareeyaan dareenka daalka ka dib jimicsiga. Si kastaba ha noqotee, waa in maskaxda lagu hayaa in horumarintani aysan aad u calaamadeysneyn.
Sp Phosphatidylserine wuxuu caawiyaa la dagaalanka Niyad jabka
Sannadkii 2015-kii, daraasad lagu daabacay Cudurka Maskaxda ayaa shaaca ka qaaday in dadka jira 65 iyo wixii ka sarreeya, qaadashada joogtada ah ee loo yaqaan 'Phosphatidylserine', 'DHA' iyo 'EPA' ay hoos u dhigi karaan niyad-jabka. Sidoo kale, daraasad kale ayaa shaaca ka qaaday in kaabista Phosphatidylserine ay dhiirrigeliso dareenka qanacsanaanta iyo farxadda ka dib cashar jimicsi iyada oo la yareynayo heerka cortisol ee culeyska fekerka keena uu yahay hormoonka walaaca.
Can Waa loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo ADHD ee Carruurta
Daraasad 2012 ah ayaa daraasad ku sameysay saameynta Phosphatidylserine ee ku dhaca carruurta qaba ADHD ama feejignaanta hoos u dhaca hyperactivity disorder. 200 oo caruur ah oo qaba ADHD ayaa kaqaybqaatay daraasadda, kuwaas oo soo gabagabeeyey in 15 toddobaad oo daaweyn ah la isticmaalayo Phosphatidylserine oo ay weheliso aashitada omega-3 ee dufanku ay waxtar u lahayd daaweynta ADHD. Caruurta la siiyay iskudhafkan ayaa isdiiwaangaliyay hoos udhaca hyperactive ama dabeecad kacsanaan iyo niyadda kacsan. Sanadkii 2014, daraasad kale ayaa la sameeyay oo lagu falanqeynayay fosfididdelserine si loo helo '36 caruur ah oo la ildaran xanuunka' ADHA muddo laba bilood ah. Dhamaadka daraasadda, kooxda daweynta waxay soo bandhigtay xasuus iyo feejignaan hagaagsan.
Ka sokow faa'iidooyinka aan kor ku soo sheegnay, kordhinta Phosphatidylserine waxaa sidoo kale lala xiriiriyaa kor u qaadida awooda orodka anaerobic, daal yareyn iyo saxsanaanta ka shaqeynta iyo xawaaraha.
Waa maxay qaab-dhismeedka fosfatidylserine?
Phosphatidylserine waa fosfooliid-gaar ahaan glycerophospholipid —oo ka kooban laba asiidh dufan ah oo ku lifaaqan isku xidhka ester ee isku xidhka koowaad iyo kan labaad ee glycerol iyo serine oo ku xidhan isku xidhka fosfodiester-ka ee kaarboonta saddexaad ee glycerol.
Maxaan ugu Baahanahay Phosphatidylserine (PS)?
Maalmaha qaar, maskaxdeenu waxay dareemeysaa inay xirantay oo aysan qaban karin wax shaqo ah. Xaaladaha badankood, tani waxay ku dhacdaa sababtoo ah hoos u dhaca shaqada garashada, oo ah gobol ku badan dadka da'da ah laakiin aan dhif iyo naadir ku ahayn dhalinyarada qaangaarka ah. Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, saynisyahannada iyo cilmi baarayaashu waxay muujiyeen kalsooni weyn oo ay ku qabaan awoodda Phosphatidylserine ee lagu daweynayo shaqada garashada oo yaraatay. Muhiimad ahaan, cilmibaarista sii kordheysa ee aagga waxay dadka u bandhigtay faa iidooyinka kale ee Phosphatidylserine, sida awooddeeda daaweynta xaaladaha, sida cudurka Alzheimer iyo ADHD iyo sidoo kale awoodda ay u leedahay inay hurdada kor u qaaddo ayna kor u qaado niyadda.
Kahor intaanan guda galin faahfaahinta waxa Phosphatidylserine ay u qabato jirka bini'aadamka, aan marka hore fahanno maxay tahay Phosphatidylserine (PS).
Waa maxay isticmaalka Phosphatidylserine (PS)?
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, baahida loo qabo kaabisyada loo yaqaan 'Phosphatidylserine supplements' ayaa si aad ah kor ugu kacay iyadoo loo aaneynayo dhowr adeegsi oo loo yaqaan 'Phosphatidylserine' (PS). Bilawga, Phosphatidylserine waxay waxtar badan u leedahay kobcinta shaqada garashada iyo yareynta garashada garashada. Sidoo kale, waxay sidoo kale muujisay inay wax ku ool u tahay ka hortagga ADHD ee carruurta iyo sidoo kale dadka waaweyn waxayna si wax ku ool ah wax uga qabataa culeyska jimicsiga iyadoo hoos loo dhigayo heerarka cortisol ee jirka ku jira. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa inay kobciso dareenka qofka, xusuusta shaqada iyo wax soo saarka jimicsiga.Phosphatidylserine sidoo kale waxaa loo yaqaanaa inay tahay niyad iyo xoojin hurdo. Sababtoo ah sababahan oo dhan iyo in ka badan, baahida loo qabo kaabista Phosphatidylserine ayaa si aad ah kor ugu kacday sannadihii la soo dhaafay.
Intee in le'eg oo fosfatidylserine ah ayaan qaataa si loo yareeyo cortisol?
Qiyaasta saxda ah ee Phosphatidylserine (PS) waxay kuxirantahay dheefaha looqaadayo. Waxyaabaha guud ee la isku raacsan yahay ayaa ah in qiyaasta caadiga ah ee 100 mg, la qaato seddex jeer maalintii, taas oo wadarta guud ee 300 mg maalin kasta, ay labadaba amaan tahay oo wax ku ool u tahay hoos u dhaca garashada. Dhinaca kale, marka loo isticmaalo daawada 'Phosphatidylserine' in lagu daaweeyo ADHD, qiyaasta caadiga ah ee 200 mg maalintii ayaa loo arkaa mid ku habboon carruurta iyo 400 mg maalintii ayaa loo arkaa mid ku habboon dadka waaweyn. Alzheimers, qiyaasta 300-400 mg ayaa loo arkaa inay lagama maarmaan tahay. Haddii dheecaanka 'Phosphatidylserine' loo isticmaalo in lagu wanaajiyo wax soo saarka jimicsiga, dadka isticmaala waxaa laga codsanayaa inaysan ka badnayn xaddiga xaddiga daawada 300 mg maalintii.
Sideed u yareyn kartaa heerarka 'cortisol'?
Waad qaadan kartaa kaabista PS maalintiiba 10 maalmood oo jawaab celin cortisol ah kahor iyo inta lagu gudajiro culeyska jimicsiga.
Waa maxay cortisol jirkaaga?
Cortisol waa hormoon steroid ah oo nidaamiya habab ballaaran oo jirka oo dhan ah, oo ay ku jiraan dheef-shiid kiimikaad iyo jawaab-celinta difaaca jirka. Waxay sidoo kale leedahay door aad muhiim u ah ka caawinta jirka inuu ka jawaabo diiqada.
Immisa fosfatidylserine ayaa ku jira soy lecithin?
Qaybaha ugu waaweyn ee lecithin-ka ganacsiga soybean-ka laga helo ayaa ah: 33-35% saliidda Soybean. 20-21% Phosphatidylinositols. 19-21% Phosphatidylcholine.
Phosphatidylserine waxaa laga helaa soy lecithin qiyaastii 3% wadarta wadarta fosfolipids.
Goorma ayey tahay inaad qaadato fosfatidylserine?
Phosphatidylserine waxay ku shaqeysaa wajiga hore, marka heerarka cortisol ay sarreeyaan. Waxaa sida ugu wanaagsan loo qaataa marka heerarka cortisol ay marayaan heerkooda ugu sarreeya. Tusaale ahaan, miyaad ku soo toosaysaa xaalad culeys cadaadis shaqo darteed? Qaad subaxdii si aad uga hortagto welwelka iyo walwalka oo kordha.
Miyay tahay in la qaato fosfatidylserine habeenkii?
Phosphatidylserine (PS 100; qaado hal ilaa labo waqtiga jiifka). Phosphatidylserine waa kaabis fosfooliid ah oo nafaqeeya oo joojiya soosaarka kacsan ee cortisol ee jirka, taasoo u oggolaaneysa caafimaad darro, heerarka cortisol ee sareeya inuu yareeyo, sidaas darteedna, hurdo nasasho badan ay dhacdo.
Mudo intee le'eg ayay ku qaadataa fosfatidylserine inuu shaqo bilaabo?
Qaadashada fosfatidylserine waxay hagaajin kartaa qaar ka mid ah calaamadaha cudurka Alzheimer ka dib 6-12 toddobaad oo daaweyn ah. Waxay umuuqataa inay sida ugufiican ugushaqaynayso dadka qaba astaamo daran.
Waa maxay dhibaatooyinka soo raaca dawada fosfedidylserine?
Phosphatidylserine waxay sababi kartaa waxyeelo sida hurdo la'aan iyo calool xanuun, gaar ahaan qiyaaso ka badan 300 mg. Waxaa jira xoogaa walaac ah in alaabada laga sameeyo ilaha xoolaha ay gudbin karaan cuduro, sida cudurka lo'da waalan.
Waa maxay faraqa u dhexeeya L serine iyo phosphatidylserine?
L-serine waa amino acid muhiim u ah soo saarista fosfatidylserine, taas oo qayb ka ah xuubka unugyada maskaxda (ie, neerfaha). Waxaa lagu soo saari karaa jirka, oo ay ku jiraan maskaxda, laakiin saad ka baxsan cuntada ayaa lagama maarmaan u ah ilaalinta heerarka lagama maarmaanka ah.
Maxaa sababa yaraanshaha serine?
Dhibaatooyinka yaraanta Serine waxaa sababa cillad ku jirta mid ka mid ah saddexda isku-dhafka enzymes ee wadada L-serine biosynthesis.
Muxuu L Tyrosine u sameeyaa jirka?
Waxaad arki kartaa tyrosine lagu iibiyey qaab dheeri ah oo leh ama aan lahayn "L." Tyrosine waxay kujirtaa dhamaan unugyada jirka bina aadamka iyo inta badan dheecaanadiisa. Waxay ka caawisaa jirka inuu soo saaro enzymes, hormoonnada tayroodhka, iyo melanin midabka maqaarka. Waxay kaloo ka caawisaa jirka inuu soo saaro neurotransmitters-ka caawiya unugyada neerfaha inay is-gaarsiiyaan.
Waa maxay shaqada serine?
Serine waa amino alar polar ah oo door muhiim ah ka ciyaara dheef-shiid kiimikaadka, horumarinta dhirta, iyo calaamadaha unugyada. Marka lagu daro inuu yahay dhisme dhisme oo loogu talagalay borotiinka, Serine wuxuu kaqeybqaataa biosynthesis of biomolecules sida amino acids, nucleotides, phospholipids, iyo sphingolipids.
Waa maxay cunnooyinka ku badan phosphatidylserine?
Waad xoojin kartaa qaadashadaada fosfatidylserine inkasta oo ay cunto tahay - waxaa laga heli karaa dhowr cunno, oo ay ku jiraan soy (taas oo ah isha ugu weyn), digirta cad, jaallo beedka, beerka digaagga, iyo beerka lo'da.
Waa maxay faa'iidooyinka caafimaad ee fosfatidylserine?
Fiitamiinnada, macdanaha, iyo nafaqeeyayaalka yar yar ee ku jira fosfatidylserine waxay bixiyaan xoogaa faa'iidooyin caafimaad oo muhiim ah. Phosphatidylserine waxaa loo yaqaanaa inay u shaqeyso sidii antioxidant, caawinta yareynta saameynta xagjirka xagjirka ah ee halista ah ee jirkaaga. Tani waxay kaa caawin kartaa yareynta halista aad ugu jirto xaaladaha sida sonkorowga iyo kansarka.
Sidee buu fosfatidylserine ugu dhaqmaa sidii sumadeeyaha apoptosis?
Human phospholipid scramblases (hPLSCRs) ayaa door muhiim ah ka ciyaara howlaha muhiimka ah ee gacanta. hPLSCR1 wuxuu kiciyaa apoptosis by fosfatidylserine soo-gaadhis dhexdhexaadin ah phagocytosis. hPLSCR3 ayaa dhexdhexaadinaysa kaar-bararka wadnaha ee dhexdhexaadinta apoptosis ee mitochondria.
Fosfatidylserine ma amino acid baa?
L-serine waa amino acid muhiim u ah soo saarista fosfatidylserine, taas oo qayb ka ah xuubka unugyada maskaxda (ie, neerfaha). Waxaa lagu soo saari karaa jirka, oo ay ku jiraan maskaxda, laakiin saad ka baxsan cuntada ayaa lagama maarmaan u ah ilaalinta heerarka lagama maarmaanka ah
Waa maxay doorka weyn ee Phosphatidylethanolamine?
Phosphatidylethanolamine wuxuu door ka ciyaaraa iskuxirka lactose permease iyo borotiinka kale ee xuubka. Waxay u shaqeysaa sidii 'chaperone' si ay uga caawiso borotiinada xuubka si sax ah isku laalaabta dhismahooda jaamacadeed si ay si wanaagsan ugu shaqeeyaan.
Miyaad qaadan kartaa choline aad u badan?
Qaadashada choline aad u badan waxay sababi kartaa ur jidhka kalluun leh, matag, dhidid culus iyo dhareer, cadaadis dhiig oo hooseeya, iyo waxyeelo beerka ah. Daraasadaha qaarkood ayaa sidoo kale soo jeedinaya in xaddi badan oo choline ah ay kordhin karto halista cudurka wadnaha.
Fosfatidylserine ma xayrbaa?
Phosphatidylserine (PtdSer), waa udub dhexaad muhiim u ah xuubka eukaryotic, waa fosforyidiinka anionic-ka ugu badan ee ku jira unugga eukaryotic oo gaaraya ilaa 10% wadarta guud ee xinjirta unugyada. Inta badan waxa laga ogyahay PtdSer waa doorka ka baxsan jirka PtdSer ee ka ciyaara apoptosis iyo xinjirowga dhiigga.
Maxaa loo adeegsadaa fosfatidylcholine?
Phosphatidylcholine waxaa sidoo kale loo isticmaalaa daaweynta cagaarshowga, cambaarta, cudurka xameetida, dhibaatooyinka wareegga, kolestaroolka sareeya, iyo cudurka hormoonada dhiigga (PMS); si loo wanaajiyo waxtarka sifeynta kelyaha; kor u qaadista habka difaaca jirka; iyo kahortagga gabowga.
Fosfatidylserine miyuu yahay zwitterionic?
Barootiinnada noocan oo kale ah waxay ku xirxiraan fosforipids-ka (cardiolipin, phosphatidylglycerol, phosphatidylserine, phosphatidylinositol) laakiin ma ahan zwitterionic ama phospholipids dhexdhexaad ah (phosphatidylethanolamine, phosphatidylcholine).
Phosphatidylserine miyay la mid tahay Phosphatidylcholine?
Phospholipids fosfatidylserine (PS) iyo fosfatidylcholine ayaa ah walxaha labaad ee inta badan la aqbalo ee loogu talagalay dadka waaweyn ee waayeelka ah ee leh cabashooyinka xusuusta ee ay leeyihiin milkiilayaasha cuntooyinka nafaqada leh.
Fosfatidylcholine miyuu yareeyaa kolestaroolka?
Afka polyunsaturated phosphatidylcholine wuxuu yareeyaa lipid platelet iyo waxyaabaha kolestaroolka ee mutadawiciinta caafimaadka qaba.
Fosfatidylserine miyuu ka caawiyaa miisaanka oo yaraada?
Marka la soo koobo, fosfatidylserine wuxuu ka caawiyaa dhimista miisaanka iyadoo la xakameynayo heerarka cortisol. Waa tan sida ay u shaqeyso: jawaabta walaaca, qanjidhada adrenal waxay soo saaraan hormoon la yiraahdo cortisol. Waxay si dhakhso leh u galeysaa socodka dhiigga waxayna kuu oggolaaneysaa inaad si fiican ula qabsato kicinta dibadda.
Phosphatidylserine (PS) Ma Nabdoon tahay?
Cilmibaarista illaa iyo hadda la sameeyay waxay muujineysaa in Phosphatidylserine ay sifiican jirka ugu dulqaadato oo markii afka laga qaato, ay nabdoon tahay in la qaato Phosphatidylserine illaa 3 bilood iyadoo qiyaasta maalinlaha ah aan ka badnayn 300 mg maalintii. Carruurtu waxay qaadan karaan kaabayaashaas illaa 4 bilood. Si kastaba ha noqotee, qiyaasta qiyaasta maalinlaha ah ee ka baxsan 300 mg maalintii waxay u horseedi kartaa waxyeelo sida hurdo la'aan iyo arrimaha caloosha. Haweenka uurka leh iyo kuwa naas nuujinaya waa inay ka fogaadaan waxyaabaha loo yaqaan 'Phosphatidylserine supplements' maaddaama aysan jirin caddeyn ku filan oo caddeynaysa in kaabisyadan ay u badbaado u yihiin kooxahan.
Dad badan ayaa doorbida supplements kaabayaasha ku saleysan Phosphatidylserine maxaa yeelay waxaa la rumeysan yahay in kaabeyaasha ku saleysan xoolaha ay daaha ka qaadaan isticmaalayaasha cudurada la xiriira xoolaha. Si kastaba ha noqotee, daraasad cilmi baaris ah ma aysan helin caddeyn la taaban karo oo taageeraysa fikradan.
Halkee Iibsataa Phosphatidylserine (PS) Powder Budk?
Haddii aad shirkad tahay soo saarista kaabista Phosphatidylserine ama shaqsi raba inuu ku iibsado budada Phosphatidylserine (PS) tiro badan ujeeddooyin kale, meesha ugu wanaagsan ee laga adeegto waa cofttek.com.
Cofttek waa soo saare waxsoosaar ceyriin ah oo suuqa ku jiray illaa 2008. Shirkaddu waxay u heellan tahay soo saaridda alaab tayo sare leh waxayna leedahay koox cilmi baaris heer sare ah leh oo khibrad leh kana shaqeeya habeen iyo maalinba si loo hubiyo in iibsadayaashu ay helayaan sida ugu wanaagsan. alaab tayo leh lacagtooda. Cofttek waxay horeyba macaamiil iyo macaamiil ugu leedahay qaybo kala duwan oo ka mid ah Hindiya, Shiinaha, Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. Waxay sidoo kale leedahay koox iib ah oo heegan ah oo hubisa dhammaan macaamiisha shirkadda inay u beddelaan macaamiil faraxsan. Budada Phosphatidylserine ee ay bixiso Cofttek waxay ku timaaddaa qaybo ka mid ah 25 kiiloo garaam oo si indho la’aan ah ayaa loogu kalsoonaan karaa tayada iyo kalsoonida. Sidaas darteed, haddii aad fiirineyso iibso budada Phosphatidylserine (PS) jumlad ahaan, ha ka adeegan meel kale oo ka baxsan Cofttek.
(1) FOSPHATIDYLSERINE (51446-62-9)
(2) La daabacay: Phosphatidylserine iyo maskaxda aadanaha
(3) Saameynta kaabista fosfatidylserine ee jimicsiga aadanaha
(4) A lecithin phosphatidylserine iyo fosfatidic acid complex (PAS) wuxuu yareeyaa astaamaha cudurka horay loo yaqaan (PMS): Natiijooyinka tijaabada bukaan socodka ee la kala soocay, xakamaynta placebo, laba-indhoolayaasha ah
(5) Aqoon-kororsi: Phosphatidylserine
(6) Safarka si loo sahamiyo eg.
(7) Oleoylethanolamide (oea) - usha sixirka ee noloshaada.
(8) Anandamide vs cbd: kee baa caafimaadkaaga ugu fiican? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato iyaga!
(9) Waxkasta oo aad ubaahantahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan nicotinamide riboside chloride.
(10) Magnesium l-threonate supplements: faa'iidooyinka, qiyaasta, iyo waxyeelooyinka.
(11) Palmitoylethanolamide (digir): faa'iidooyinka, qiyaasta, isticmaalka, kaabista.
(12) 6 faa iidooyinka caafimaad ee ugu wanaagsan ee supveverol supplements.
(13) 5 faa iidooyinka ugu sareeya ee qaadashada pyrroloquinoline quinone (pqq).
(14) Kaabista nootropic ee ugu fiican alfa gpc.
(15) Kaabista da'da ee ugu wanaagsan ee nikotiinamide mononucleotide (nmn).